Ezequiel Lavezzi Oo Macsalaameeyay Kooxda Napoli Kadib Markii Uu Si Rasmi Ah Ugu Biiray Naadiga Psg. 2012-07-03 08:05:40
ciyaaryahanka wadanka Argentina Ezequiel Lavezzi ayaa si rasmi ah ugu biiray kooxda PSG ee dalka France kadib hishiis 30 Milyan ku kacay oo uu kula biiray kooxdas.
Ezequiel Lavezzi ayaa habeenimadii isniin ahayd shir Jara’id uu ku qabtay magaalada Paris isla markaasna saxaafada loo soo bandhigay ku sheegay in uu aad ugu faraxsan yahay ku biiristiisa kooxda ka dhisan caasimada France ee PSG.
Xidiga weerarka Ezequiel Lavezzi ayaa hishiis afar sanno ah qalinka ku duugay isagoo kooxda Napoli ka caawiyay inay qaado koobka Talyaaniga halka uu keenay kaalinta ka qeyb galka koobka Champions-ka ee yurub.
Ezequiel Lavezzi ayaa shan sano kusoo qaaday kooxda Napoli laakin ugu dambeyn ayuu ka tagay kooxdas.
Xidigaan Ezequiel Lavezzi ayaa waxaa baadi goobayay kooxo dhowr ah sida Barcelona,Real Madrid,Chelsea,Labada Manchester.
Ciyaaryahanka wadanka Argentina Ezequiel Lavezzi ayaa si rasmi ah ugu biiray kooxda PSG ee dalka France kadib hishiis 30 Milyan ku kacay oo uu kula biiray kooxdas.Ezequiel Lavezzi ayaa habeenimadii isniin ahayd shir Jara’id uu ku qabtay magaalada Paris isla markaasna saxaafada loo soo bandhigay ku sheegay in uu aad ugu faraxsan yahay ku biiristiisa kooxda ka dhisan caasimada France ee PSG.
Xidiga weerarka Ezequiel Lavezzi ayaa hishiis afar sanno ah qalinka ku duugay isagoo kooxda Napoli ka caawiyay inay qaado koobka Talyaaniga halka uu keenay kaalinta ka qeyb galka koobka Champions-ka ee yurub.Ezequiel Lavezzi ayaa shan sano kusoo qaaday kooxda Napoli laakin ugu dambeyn ayuu ka tagay kooxdas. Xidigaan Ezequiel Lavezzi ayaa waxaa baadi goobayay kooxo dhowr ah sida Barcelona,Real Madrid,Chelsea,Labada Manchester.